Zidane oo war farxad leh ku helay tababarka kooxda Real Madrid kahor kulanka ay wajahayaan Real Valladolid – Gool FM
Zidane oo war farxad leh ku helay tababarka kooxda Real Madrid kahor kulanka ay wajahayaan Real Valladolid
Dajiye February 17, 2021
(Madrid) 17 Feb 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ku soo laabatay tababarka, si ay ugu diyaar garoobaan kulanka Real Valladolid ay Sabtida kula ciyaari doonaan horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in xiddigo badan oo dhaawac kaga maqnaa Real Madrid ay ku soo laabteen qolka jimicsiga ee kooxda, kuwaas oo jimicsi ku sameeyay cowska maalmihii la soo dhaafay.
Xiddigahan ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahanka reer Belguim ee Eden Hazard kaasoo bilaabay inuu shaqeeyo, Sidoo kale waxaa soo laabtay ciyaartoyda kala ah Federico Valverde iyo Rodrygo, kuwaasoo la filayo inay si xoogan ugu soo laaban doonaan kooxda maalmaha soo socda.
Sidoo kale waxaa jiray war farxad leh oo aad u muhiimsan kaasoo ah soo laabashada Éder Militão iyo Álvaro Odriozola, oo ku orday cawska markii ugu horeysay kaddib dhaawacii soo gaaray, laakiin wali waxay heli doonaan toddobaad kale si ay u soo kabtaan.
Marcelo, Dani Carvajal iyo Ramos ayaa sidoo kale tababar ku qaatay qolka jimicsiga, laakiin waa in la sugaa si loo ogaado waqtiga ay garoomada ka maqnaan doonaan.
Laakiin waxaa hubaal ah in kabtanka Sergio Ramos uu ka maqnaan doono kulanka Atalanta, halka kuwa kale shaki weyn uu ku jiro, sidaas darteed Zidane wali maqnaansho badan ayuu qabaa.
Maxay ahayd Sababtii uu Kylian Mbappe isaga diiday ku biirista Kooxda Arsenal??
Fabio Capello oo ka hadlay wararka Messi la xiriirinaya inuu ku biirayo Paris Saint-Germain